Dawlada Greece oo xukuntay ciidamadii baxsatka ee Turkiga - iftineducation.com
Dawlada Greece oo xukuntay ciidamadii baxsatka ee Turkiga
iftineducation.com – Maxkamad ku taalo wadanka Greece ayaa labo bilood xabsi ganaax ah ku xukuntay sideed saraakiisha militariga Turkishka ee u cararay dalkaasi ka dib markii todobaadkii hore dhicisoobay isku daygii la doonay in lagu afganbiyo xukuumada Turkiga
dhamaan saraakiishan oo heerkoodu sareeyo ayaa khamiistii xukun isku mid ah lagu riday ka dib markii lagu eedeeyay in si sharci-darra ah dalka Gariiga kusoo galeen iyadoo , la aqoonsanyahay duruufaha markaasna ay halis ku sugnaayeen
duuliyaha diyaarada waday saraakiishaasi ayaa waxaa lagu waayay eedeemo dheeraad ah ee ku xadgudbay xeerarka duulimaadka, iyadoo toddoba kalena ay wehelinayeen .
Xukunka laba bilood ayaa dib loo dhigay muddo saddex sano ah, laakiin askarta ayaa lagu haynaya xabsiga inta ay socoto codsiyada magangalyada, oo ay dawladaasi ka dalbadeen
Dawlada Turkey ayaa dalbaday in gacanta loo soo galiyo askartaasi si maxkamadda loo soo istaajiyo danbiyo la xiriira isku day afgambi.
Sideedan askari ayaa beeniyey inay wax lug ah ku lahaayeen inqilabkii dhicisoobay islamarkaana codsadeen magangalyo, iyagoo sheegay in ay u cabsi qabaan , ammaankoda “Waxay aaminsan yihiin in, qaabkey ahaataba ay waayi doonaan naftooda ,” ayuu yiri Vasiliki Ilia Marinaki, qareen wakiil ka ah afar ka mid ah raggii, kasoo hor muuqday maxkamadda oo wejigooda daboolay.
Turkey ayaa dhanka kale, ku tilmaamay in ragaani “Khaa’inimo iyo argaggixisnimo ku talaabsadeen ” iyago dawlada Greece ka codsaday in ay iyaga loo gacan geliyo.
Greece ayaa sheegay in si deg deg ah ku baarayaan codsiyada magangalyada.
Askarta ayaa ka soo hormuuqan doona maamulka socdaalka dalkaasi bisha July 27 deda
ninkeyga turuuk ayuu wadaa, iimana galmoodo